Iindidi zeefilitha ze-aquarium | Ngeentlanzi
Xa sine-aquarium ekhaya, kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo into nganye eya kuthi isincede sigcine iintlanzi zethu zikwimeko efanelekileyo. Kungenxa yesi sizathu ukuba namhlanje sifuna ukukuxelela kancinci malunga iintlobo zeefilitha Siza kuyidinga echibini lemfuyo yethu yasemanzini.
Icebo lokucoca ulwelo ngekona: Olu hlobo lwecebo lokuhluza luphawulwa ngokuba, ngokufutshane, ibhokisi yeplastiki ebonakalayo, ebekwe ngaphakathi kwi-aquarium. Ngokusebenzisa ilitye le-aerator, elingaphakathi kwetyhubhu ebhityileyo, amanzi anyanzelwa ukuba adlule kwindawo yokuhluza egcina amasuntswana apho kubekwe khona ibhaktheriya. Ukuba unolu hlobo lwecebo lokucoca ulwelo kwi-aquarium yakho, kubalulekile ukuba uyihlambe okanye uyitshintshe ngokuyinxenye ukuze ungalahli zonke iintyatyambo zebacteria ezikunceda ulungelelanise indawo yokuhlala ye-aquarium.
Icebo lokucoca ulwelo: Olu hlobo lwecebo lokucoca ulula lufumaneka ngokulula kwii-aquarium ezikhethekileyo nakwiivenkile zentlanzi, kwaye luhlobo lwecebo lokucoca ulwelo elisetyenziswa phantsi kwesanti ye-aquarium. Ezi ntlobo zeefilitha zisebenza ngendlela yokuba zivumele amanzi e-aquarium ukuba adlule kumhlaba okanye isanti enayo i-aquarium. uhlobo lokutsala ngetyhubhu yeplastikhi apho kuphuma khona amanzi afunxwayo.
Icebo lokucoca ulwelo lwesiponji: Iifilitha zesiponji ziluhlobo olusebenzayo nolungabizi kakhulu lwecebo lokucoca ulwelo. Ezi zihluzo zibonakaliswa ngokuvumela amanzi ukuba adlule kwimingxunya yesiponji, evumela ukusekwa kweekoloni zebacteria kuzo ezinceda ekunciphiseni i-ammonia enokuba nayo amanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Iindidi zeefilitha ze-aquarium